Ndeipi mhando yepamusoro yewiricheya muAmerica uye nei? | Karman® Mawiricheya
Ndeipi mhando yepamusoro yewiricheya muAmerica uye nei?
Posted on September 14, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Paunenge uchitsvaga mavhiri emawiricheya, iwe unogona kuona kune akasiyana akasiyana akasiyana pezvitsiga zvakaita se Karman, Invacare, Dhiraivha Medical, uye Medline. Asi ndeipi iri yakanakisa wiricheya brand muAmerica? Izvo zvese zvinoenderana nemubatanidzwa we mutengo poindi, huremu hwechigadzirwa uye mashandiro, pamwe nezvako zvaunoda.
Mhando zhinji vane yavo yakasimba sutu mumapoka akasiyana e mavhiripu. Mapoka akajairika manyorerwo uye emagetsi mavhiripu. Zvichienderana nei mhando cheya cheya iwe chauri kutsvaga, chinogona kuuya neakasiyana mitengo yemitengo, unhu, uye mabasa ayo ega ega anopa.
Manual mawiricheya usauye nemafambiro emota. Zvinoda muchengeti kuti Push mushandisi mu wiricheya by kushandisa anobata kumusana kwe wiricheya. Inogona zvakare kufambiswa nemaoko ne kushandisa maoko ekushandura mavhiri kuenda kumberi kana mushandisi agara pasi pachigaro. Mukati me wiricheya yemawoko chikamu, zviripo lightweight, kutakura, ergonomic, inoshanda, uye yakajairwa mavhiripu. Chimwe nechimwe chazvo chinosiyana nekurema uye mashandiro. Zvichienderana nerudzii rwe wiricheya yemawoko urikutsvaga, iyo mutengo dzinogona kusiyana kubva kune imwe asi dziri inowanzo mutengo nemitengo inonzwisisika.
Mawiricheya ane simba (kana mota mavhiripubvumira otomatiki mafambiro anodzorwa nemushandisi. Tsvimbo yekudzora iri padyo nenzvimbo yechigaro inobvumidza mushandisi kutungamira mafambiro avo asingade rubatsiro. Zvisinei, mawiricheya anofambiswa zvinowanzo dhura uye hazvisi nyore senga. Zvimwe zvigadzirwa, senge Karman, inopa lightweight wiricheya yemagetsi izvo zvinokutendera iwe kupeta. Kwete izvi chete zvinoita inopa rusununguko, asi inobvumira nyore kutakura chero kupi iwe enda.
Wese munhu ane zvakasiyana zvinotarisirwa uye zvinodiwa kana zvasvika pakutsvaga a wiricheya. Zvakanakisa wiricheya brand muAmerica ndiyo inogona zvinopa iwe zvauri kutsvaga mukati wiricheya uye inosangana nezvaunotarisira.
Chii chauchaita kana iwe uchizoguma wave pawiricheya?
Wiricheya yemagetsi inofanirwa kubhadharisa here kana kuti inoda gasi?